Home » Lahatsoratra farany farany » fivoriana » Daty vaovao ho an'ny ITB Berlin: 9-13 martsa mivantana sy mivantana
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao • WTN
Tamin'ny taona 2020 dia nofoanana ny ITB andro vitsivitsy talohan'ny tokony hanombohan'ny hetsika lany. eTurboNews Efa naminavina ny fanafoanana, fa tany Berlin ary nanomboka ny rebuilding.travel dinika, niaraka tamin'ny PATA sy African Tourism Board. Amin'ny 2022 dia hitohy any Berlin ity fifanakalozan-kevitra ity - amin'ity indray mitoraka ity miaraka amin'ny ITB andrasana ho matanjaka sy velona.
Messe Berlin, mpikarakara ny ITB dia nanamafy fa hiverina ny seho ara-barotra indostrialy fitsangatsanganana lehibe indrindra.
Ny ITB dia voalahatra ny 9-13 martsa 2022 any Alemaina Renivohitra
Ny foto-kevitra G2 dia hampiharina. Midika izany fa mpitsidika na fampirantiana vita vaksiny na sitrana ihany no mahazo alalana.
Tamin'ny taona 2022 dia niverina mivantana tany Berlin ny fampisehoana Travel lehibe indrindra eran-tany, miaraka amin'ny hetsika manokana sy serivisy virtoaly mba hahatonga ny ITB Berlin ho traikefa manerantany indray.
Vaovao tsara ho an'ny Hotely Berlin, mpamily fiarakaretsaka, trano fisakafoanana, zotram-piaramanidina, ary ny olon-drehetra eran'izao tontolo izao izay mivelona amin'ny indostrian'ny fizahantany sy ny fizahantany.
Fandrosoana tsara ho an'ny tontolon'ny fizahantany izany, ary ny fahatokisana ilaina amin'ny fanarenana ny sehatra,
The Tambajotra fizahan-tany manerantany nanomboka tany Berlin tamin'ny martsa 2020 teo amin'ny sisin'ny ITB nofoanana. “Tsy andrinay ny hihaona any Berlin amin'ny 2022 miaraka amin'ny ITB.”, hoy i Juergen Steinmetz, filoha sady mpanorina ny fikambanana misy mpikambana ao amin'ny firenena 128.
ITB dia nametraka ny feo tamin'ny filazana hoe:
"Noho ny toe-draharaha misy amin'izao fotoana izao, ny mpandray anjara vita vaksiny na sitrana tanteraka ihany no mahazo miditra amin'ny hetsika mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny (fitsipika 2G)."
Araka izany, araka ny toe-draharaha ara-dalàna ankehitriny, ny fampirantiana sy mpitsidika ny ITB Berlin 2022 dia tsy maintsy sitrana vao haingana na vaksiny tanteraka amin'ny Nankatoavin'ny EU ny vaksiny COVID-19 ary manome porofon'izany miaraka amin'ny taratasy fanamarinana nomerika EU.
Araka ny Claudia Dallmer, mpanampy PR ho an'ny ITB, mpitsidika tsy EU dia tokony ho tsara amin'ny fanamarinana nankatoavina na afaka manova ny pasipaoro vaksiny ho antontan-taratasy EU.
Ho avy ny antsipiriany bebe kokoa, araka ny filazan-dRtoa Dallmer.
Amin'izao fotoana izao, mampanantena ny Messe Berlin ao amin'ny tranokalany:
Nampiseho ny maha zava-dehibe ny fihaonana mivantana eo amin'ny samy olona ireo volana faramparany. Ny hetsika toa antsika dia ny fitempon'ny indostria. Amin'ny maha-mpampiranty sy mpitsidika ara-barotra anao dia eo afovoan'ny hetsika ianao. Amin'ny 2022 dia zavatra iray no tena ilaina: tsy maintsy milamina sy mahomby araka izay tratra ny fivorianao.
Amin'izao fotoana izao, mitaky fepetra fiarovana sy fahadiovana manokana ny hetsika. Mampanantena anao izahay fa ny fiarovana ny fahasalamanao no ifantohanay. Mazava ny tanjonay: mamorona tontolo milamina sy manam-pahaizana araka izay azo atao mba hahafahan'ny indostrian'ny dia sy ny orinasanao hiroborobo indray. Mba hanatratrarana izany dia mifandray tsy tapaka amin'ireo manampahefana ara-pahasalamana mifandraika amin'ny Land of Berlin izahay.
Afaka mahita bebe kokoa ianao Eto momba ny fanontaniana momba ny fiarovana sy ny fahadiovana.